निद्रा किन लाग्दैन? अनिद्राबाट बच्ने उपाय यस्ता छन्
डा. प्रदीप पाण्डे नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ
निद्रा नलाग्नुका थुप्रै कारण भए पनि यो आफैंमा एउटा रोग पनि हो, जसलाई इन्सोम्निया भनिन्छ।
इन्सोम्नियाबाहेक निद्रा कुनै रोगको लक्षणको रुपमा पनि आउँछ। कोहीलाई भने निद्रा नलाग्ने मात्रै पनि हुनसक्छ।
(प्रस्तुतीः सन्जिब बगाले)
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ३१, २०७४, ०३:३९:१६